Mila hetsika hitam-bahoaka sy misy fiantraikany ! – MyDago.com aime Madagascar
Tatoato dia nisokatra ny ankolafy telo, kanefa dia maro no miady hevitra @ izany. Aoka anefa hazava tsara fa @ firaisakiana na fiaraha-mientana irery ihany no entintsika hampandresy ity tolona ity.
Misy fanambarana miezinezina ve, na asa ara-diplomatika na fahatongavan’ny mpanohana maro eny @ MAGRO na hetsika misongana @ sehatra hafa ? Noho izany dia manao antso avo @ ireo mpanohatra hanao hetsika hitam-bahoaka sy misy fiantraikany.
Ankolafy Ratsiraka sns….
Aiza ianareo ? Mila hetsika hitam-bahoaka sy misy fiantraikany avy aminareo ny tolona, hoan’ny tanidrazana ary manotronanareo hatrany ny vahoaka.
Ny firaisakiana tokoa no hery ka aoka samy hiara hisalahy. Satria ny vahoaka tsy madady harona no miharitra ny fahadisoana na fahalemen’ny mpitarika.
Tsy ranon’Ikopa velively ny tolona ka tonga namana vao mavomavo , fa mba misy hasiny kosa ny vahoaka ka ny fanekena heloka, ny fanampiana tena misongadina dia hangatahina sy hizingizinana. Olona afaka miara miasa ny Malagasy. Ny fiaraha-ntsika dia hitondra ny tany any @ rariny.
Mila mandroso @ fifidianana hiarahana mikarakara i Madagasikara, ka ianareo izao no andry @ izany.Tsy ho tanteraka anefa izany raha tsy manantateraka asa mivaingana sy hitamaso isika.
Ny fikambanambe: ‘Tia tanidrazana’ dia aoka tsy ho anarana fotsiny fa tena hisy tokoa hery lehibe miainga avy any @ ireo hery samy hafa ao anatiny.Mila tsapan’ny vahoaka izany satria izany no porofo fa fitiavan-tanindrazana tokoa no hiarahana fa tsy fitadiavan-tseza.
Mbola manao antso ihany @ ireo hery tia tanindrazana rehetra mba hiara hivondrona sy hetsika handrosoan’ny tolona mba hiverenan’i Madagasikara any @ ara-dalàna indray..
Isika vahoka koa dia tokony samy ahatsapa fa ny firaisakiana no herintsika. Ny fahavalo dia mpitambasy sy mpandripaka, izany no heriny, fa isika koa dia ny firaisakiana sy ny fiaraha mientana.
Tsy voatery akory isika hihoby ireo olona na fikambanana ao @ fikambanambe “tia tanidrazana” fa i Madagasikara no jerentsika, ary ny idealintsika no banjintsika. Aoka tsy ho diso lalana na fahavalo isika fa ny mandrodana ny FAT aloha no tena zava-dehibe, ary miara-manomana ny fifidianana tsy maintsy ho tanterahina. Ny tolontsika vahoaka no ahafahn’ireo gadra politika mivoaka ny fonja ary ny hiverenan’ireo sesi-tany.
Vahoaka miara mientana ny Malagasy, ary vahoaka tsy manaiky ny fanoganam-panjakana nataony andry rajoelina , baiko azo avy @ frantsay.
Mbola misy ihany anefa ireo misalasala hoe frantsay ve ny aorian’ireo FAT ireo ? Manasa antsika rehetra hijery an’i Mauritanie, GuinéeBissau, Niger, Côte d’Ivoire, Tunisie ….i Madagasikara… toa tany miteny frantsay avokoa ary ny fandraisan’ny frantsay anjara ao @ ilay crise dia tena hitamaso….
MIFOHAZA RY MALAGASY FA VERY NY TANINAO. NY FIRAISAKIANA NO HERY
Ny fampitahorana dia misy fa ny fahatahorana tsy misy !
Auteur LazalazaoPublié le 3 avril 2011 3 avril 2011 Catégories Malagasy, Politique
9 pensées sur “Mila hetsika hitam-bahoaka sy misy fiantraikany !”
4 avril 2011 à 0 h 31 min
Tena mety ny teninao ry Lazalazao!
Miombon-kevitra amin’izany aho! Ary ny tena tsara moa dia maninona raha averina ilay fihetsika izay nataontsika tamin’ny 29 Marsa iny e?… Jereo tsara fa raha vao ny tena « leader » no mitarika (Prof. ZAFY) dia tsy misy sahy misambotra ny olona.
Koa raha tena hihetsika isika dia ATAOVY TSARA NY FANENTANANA!
Averiko etoana ihany fa ny SADC sy ny CI dia MANAMPY FOTSINY, FA TSY HANAO NY ZAVATRA TOKONY ATAONTSIKA! Tsy hihetsika loatra rizareo ireo raha tsy mahita fa MIHETSIKA AM-PILAMINANA isika!
Aoka ary ny olona tsirairay handray ny andraikiny amin’izay e!
4 avril 2011 à 6 h 11 min
I Pr ZAfy Albert no atao hoe : tsy misy sahy mikitika.
Mba lazalazao ny vaovao mahakasika an’i Professeur Raymond RANJEVA ê!
Ilaina ny mankahery vahoaka amin’ny fomba rehetra s madio.
Fa tandremo sao misy zavatra misolilana ao amn’ny fidiran’ny monima fa tsy ataonay ambaninjavatra mihintsy ny tolona sy ny tanindrazana.
Ao mampiady foko ao indray mantsy i roindefo fa hoe manavakavabolokoditra ny 3 mouvances. Mafy ilay manana complexe d’infériorité fa tena tsy takatrin’ny sainy ny fisian’ny mouvance Ratsiraka sy ny mouvance Zafy.
Mankahery anareo any antanindrazana tokoa izahay. Ary aza manaiky ny ho hitsakitsahan’ny sasany ny tolona sy ny tanindrazana.
Tsy misy madilana ho tetenana akory ny HEVITRAO r’i LAZALAZAO !
Ny hevitrao hoy aho, satria eo amin’ny lafiny firaisana dia hanahirana ihany ! Ny antony dia iaraha-mahalala fa maro no mitady fanazavàna misimisy kokoa amin’ity fihetsikaaon’i Roindefo ity !
– Nisy nilaza fa tokony hanao fanambaràna am-pahibemaso izy hilaza ny heviny mikasika ny HAT na ny FAT, ary tokony haneho fifonana aza noho ireny Faty-olona tamin’ny Fevrier 2009 ireny !
Koa tsara ny Hiraisana fa aoka kosa hazava ny fipetraky ny fifanarahana, satria, mbola tsy fatatra izay ho fihetsika ataon’ny MONIMA sy ny lafiny Ratsiraka !
Manaraka izany, dia mikasika ny FRDL : Amiko dia io no Antoko Politika isan’ny madio amin’izao fotoana, ary efa nampiseho ny vitany sy ny zavatra kendreny !
Ny mampalahelo anefa, dia mbola mifikitra amin’ny Filazàna hoe :Hetsiak TELO ihany isika, anefa efa misy ny firaisana amin’ny Antoko FRDL sy MONIMA, Ny Pr Ranjeva….
………sa kosa tsy ilaina tononina ireo fa iretsy voalohany ihany no TOKONY ho andrianina sy omena hanitra kokoa ?!!
Raha miaraka ireo Antoko ireo dia efa Hetsika ataon’ny Firenena izany ka tsy Hetsika ataon’y Antoko Telo fotsiny ihany.
Noho izany dia manantena aho fa mba hiova ireo Hetsika 3 ireo, HANAIKY fa hetsika iraisan’ireo Vondrona manohana ny Ara-dalàna, ary maniry ny Fiverenan’ny Prezida M. Ravalomanana daholo ireo . Izany no ho mariky ny FIRAISANA AMIKO !
tsy mpanavaka volonkoditra dit :
4 avril 2011 à 17 h 21 min
Ory my dago a, anontanio Monsieur Monja raha manaiky ny hiverenan’i President Ravalomanana antanindrazana, sady ho afaka hirotsaka hofidiana dia milamina ny resaka. Angaha tsy tadidinareo fa ny tato anatiny (ireo mpomba andravalo(TIM) izay tokony hiaro azy hatramin’ny farany aza namadika , lasa niray sosy any @ FAT , ka maika olona responsable VOALOHANY t@ nanonganana Azy(pd R8)ve tsy hampiahiahy? Tsy misy idiran’ny fanavakavaham-bolokoditra velively izany, izahay aza Merina , nefa i Manoela no tena tianay indrindra t@ ireo mpitaritolona ! ajanony ny filana ady @ samy mpitolona tompoko
4 avril 2011 à 20 h 30 min
Mifona aho raha miverina kely amin’ilay sary asehon’i Tananews, mikasika ilay mpangalatra novonoin’olona !
Tena mampalaehlo tanteraka mihitsy, ary tsy zaka ho jerena, fa tena mampioron-koditra !
Ny tena marina anefa tsy misy mahalala fa dia io no tao hoe : NANGALATRA na dia nisy olona nanondro fotsiny aza !
Ny any mba tiako holazaina, dia mitodika amin’ny vahoaka aho :
Aoka re Tompoko raha hamon,o olona ianareo mba ireo manageja, sy mangorona lny fananareo, na miseho mafy be satria mitana basy, na ireo iraka alefan’i Risara baomba no aoka hiaran’ny hatezeranareo a !
Aza ny madiinika tsy mahita ny hanin-kohanina no atao an’izao na nangaltra aza izy !
Ny fahadisoana TSY AZY mihitsy na nangalatra aza izy, fa ireo FAT sy Ratsirahonana sy Alain Ramaroson, sy ny FIS, sy Voninahitsy…ireo atao an’izao, fa TSY HIORIN6KODITRA AHO raha iteo no hiaran’izao !
Jereo ny lohateny ery ambony dia ampiaro amin’ireo Mpitondran’i TGV ireo izao, fa ireo no tena TOMPON’ANDRAIKITRA §
eNGA ANIE MBA HO VOAVAKIN4NY VAHOKA MARO ITY VOASORATRA ITY, FA TENA EFA TSY RARINY INTSONY,
Aoka tokoa mba hisy hetsika hanafongorana ireo tsy vanona mpitondra FAT ireo !
4 avril 2011 à 20 h 33 min
AOKA MBA HISY FIOMANANA :
ny amin’ny 26 JUIN dieny izao :
fa leo fahoriana ny vahoaka.
Amiko dia toy izai no tokony ho atao :
Raha misy filaharana aton’ny FAT eny Mahamsina,
isika kosa eny Ambohijatovo.
– ka raha mankeny Ambohijatovo ny fat,
Isika kosa eny Mahamasina !
Asa raha mety izany fa ny tsy iarahana amin’ireo mihitsy no tanjoko !
Tsara sy misy fahamarinany daholo ny voalazanareo fa aoka tsy holany andro amin’ny resa-be intsony isika na hiady hevitra na ho be fanahiana (suspicion)satria rehefa manatrika ny fivoriana mikasika ny tolona aho dia hitako fa lasa lany andro amin’izany isika fa tsy ny GREVE GENERALE mandritra ny volana maro no hatao dia mikatso ny rehetra,ary dia mirodana io fat io,izany no fomba pacifiste sy mahoby any amin’ny firenena rehetra manao révolution , tsy hafaka hanenjika anao any antranonao akory ny hery mpamoretana ka miantso ny fonctionnaires rehetra sy hery rehetra hivondrona fa ny hoavin’ny Zanatsika sy ny Firenena no zavatra lehibe.
Misy tokoa ny hevitra tsara mivoaka eto , ary mapiseho izany fa misy ny Malgasy tsy voateryho lomorina sy mila seza fotsiny. Hoy aho hoe ny fiaraha-mientana no herintsika satria raha mira-mihetsika daholo ny olona,ohatra ilay voalazan\_i « »masinteny » hoeGREVE NENERALE sy ilayvoalazan0 Njara hoe @ 26 juin dia tenahandroso lalina @ fivorana NY TOLONA SUY NY FAHAMARIANANA ARY NY FIVOAHANA @ KRISz.
INy @ roi des fous dia iaraha mahalala fa manahirana, nefa raha afa manao ireo zavatra roa voalaza eo @ lohateny ireo izy dia azo raisina tsara. Maro amintsika anie no efa namela an’i Charles e. Tsy midika fanadinoana velively anefa izany fa i ndefo anie raha mirotsak ho fidiana eo da ahazo 2% taloha aza ny azy 0,2%
. Ny zanak’i Dada akory tsy bado ka hanadio ny nataon’i Ratsiraka sy ndefo, fa misy ny maika sy tokony hatao zaoary mitovy ny tanjona dia ny fanbdrodanana ny FAT. eo @ fifidiana anie dia tonga dia hazava be fa hiparitaka ny fikambanabe « »tia tanindrazana e ary tsy olana mihitsy izany na kely aza. Jereo tsar fa mbola « intouchable » i Ndefo hatr@ izao. ka izy iany no tokony hanao zavatra . Raha tsy manao kosa izy tonga dia degage, OUSTE. Fa aleo aloha miaraka fa ilaina izany.
Précédent Article précédent : Hadino sahady ve i Tsimba sy i Misa ?
Suivant Article suivant : TOM, DOM ou colonisation, esclavage et extermination douce à la clé